Waxaan weydiiyay Skellefteå iyo badbaadada dhalinyarada. adkaysasho oo waxaan bartay in salaadda, midho. Had iyo jeer si aan u wada tukaday markii ay Anna-Maja yimid.
Tan iyo markii aan ku noolaa albaabka soo socda si ay Sven oo ahaa wadaad hore ee Finland oo wuxuu soo waday daryeelka jecel oo uu naagtiisa ka jiran, laakiin gurigooda mar walba ahaa mid u furan in ay nin dhallinyaro ah oo jeclaaday Ciise Masiix.
In Skellefteå waxaan helay awowayaashiin ruuxiga ah iyo hooyooyinka i taageeray oo tukaday ii.
Bridget iyo Martin
Markaas ayaan ka heli in la keeno Bridget iyo Martin oo sidoo kale ku tukaday, aniga iyo ii subkay saliid in aad leedahay gaariga, haa, waxay lahaayeen ma saliidda cunnada lagu kariyo si ay ii subkay.